डिजिटल मार्केटिङ प्रभावकारी हुनुको कारण - Victor Mochere
यहाँ डिजिटल मार्केटिङ प्रभावकारी हुनुको प्रमुख कारणहरू छन्।
1. डिजिटल मार्केटिङले हरेक व्यवसायको लागि समान अवसर प्रदान गर्दछ
2. डिजिटल मार्केटिङले राम्रो राजस्व उत्पन्न गर्न मद्दत गर्छ
3. डिजिटल मार्केटिङ पारंपरिक मार्केटिङ भन्दा बढी लागत प्रभावी छ
4. डिजिटल मार्केटिङले लक्षित दर्शकहरूसँग अन्तरक्रिया प्रदान गर्दछ
5. डिजिटल मार्केटिङले ब्रान्ड प्रतिष्ठा निर्माण गर्छ
6. डिजिटल मार्केटिङले मोबाइल उपभोक्तासँग अन्तरक्रिया गर्छ
7. डिजिटल मार्केटिङले ट्र्याकिङ प्रदान गर्दछ
8. तपाईंका प्रतिस्पर्धीहरूले यो गरिरहेका छन्
डिजिटल मार्केटिङले साना र मझौला व्यवसायहरूलाई ठूला कम्पनीहरू विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने र बढ्दो ट्राफिकमा उनीहरूको हिस्सा आकर्षित गर्ने मौका प्रदान गरेर खेल मैदानको स्तर बनाउँछ। डिजिटल मार्केटिङको साथ, साना कम्पनीहरूसँग अब उनीहरूको बहुमूल्य वस्तुहरूको बिक्री र मार्केटिङ प्रक्रियाहरू प्रदर्शन गर्न स्रोतहरू छन् जुन पहिले ठूला निगमहरूमा मात्र उपलब्ध थिए।
प्रभावकारी डिजिटल मार्केटिङ प्रविधिहरूले उच्च र राम्रो राजस्वको सन्दर्भमा तपाईं र तपाईंको व्यवसायको लागि धेरै लाभदायक फाइदाहरू प्रदान गर्नेछ। डिजिटल मार्केटिङ प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले डिजिटल मार्केटिङ प्रयोग नगर्ने कम्पनीहरूको तुलनामा 78% बढी व्यापार उत्पन्न गर्छन्। डिजिटल मार्केटिङ रणनीतिहरू प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले 2.8 गुणा राम्रो राजस्व वृद्धि प्रत्याशा देख्छन्। राम्रो राजस्व वृद्धि प्रत्याशाको साथ, साना र मझौला उद्यमहरूले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने 3.3 गुणा राम्रो मौका पाउनेछन्।
हामी सबैलाई थाहा छ साना व्यवसायहरूसँग धेरै थोरै स्रोतहरू र पूंजीकरण पनि हुन्छ। यो मुख्य कारण हो कि डिजिटल मार्केटिंगले तिनीहरूलाई राम्रो र धेरै लागत-प्रभावी मार्केटिङ च्यानल प्रदान गर्दछ जसले परिणामहरू प्रदान गर्दछ। यस विधिमा टेलिभिजन र रेडियो जस्ता महँगो विज्ञापन च्यानलहरू प्रतिस्थापन गर्ने क्षमता छ। आफ्ना उत्पादनहरूका लागि डिजिटल मार्केटिङ विधिहरू प्रयोग गर्ने व्यवसायहरूले परम्परागत विधिहरू प्रयोग गर्नेहरूको तुलनामा पर्याप्त बचत देख्छन्।
डिजिटल मार्केटिङले परम्परागत मार्केटिङ च्यानलहरू लिनुको प्रमुख कारण लक्षित दर्शकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न इन्टरनेट मार्केटिङ उपकरणहरूको क्षमता हो। इ-मेल मार्केटिङको साथ, एक व्यक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा एक विशेष व्यक्तिलाई लक्षित गर्न सक्छ। त्यसकारण, डिजिटल मार्केटिङलाई मार्केटिङको उत्तम-व्यक्तिगत रूप मानिन्छ। पूर्ण रूपमा अन्तरक्रिया गर्दै र तपाइँका ग्राहकहरूलाई उचित सेवाहरू प्रदान गर्न तपाइँ तपाइँको लक्षित दर्शकहरूले के चाहन्छन् भन्ने बारे अन्तरदृष्टि दिन सक्छ। यसले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
डिजिटल मार्केटिङको शक्तिले लक्षित ट्राफिकलाई आकर्षित गरिरहेको छ। यी प्रकारका दर्शकहरू तपाईंको ब्रान्ड, उत्पादनहरू, वा सेवाहरू बारे थप जान्न तयार हुनेछन् र खरिद गर्न पर्याप्त रुचि हुन सक्छन्। 50% उपभोक्ताहरू एक विशेष ब्रान्ड तिर झुकाव छन् यदि तिनीहरूको खोजको क्रममा नाम दुई पटक वा बढी देखिन्छ। तपाईंले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा डेलिभर गर्नाले तपाईंको लक्षित दर्शकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसले तपाईंको ब्रान्ड प्रतिष्ठा सुधार गर्नेछ।
निस्सन्देह, मोबाइल इन्टरनेट सूचना र सञ्चारको नयाँ लहर हो। यी मोबाइल उपकरणहरू संसारभरको एक प्रमुख भाग बनेको छ। आज अधिकांश मानिसहरूसँग स्मार्टफोन छ र समाचार, सामाजिक सञ्जाल र अन्य अनगिन्ती गतिविधिहरूको लागि त्यो स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। डिजिटल मार्केटिङले तपाईंलाई तिनीहरूमा पुग्न मद्दत गर्दछ र रिमार्केटिंग विज्ञापनहरू, इमेल र टेक्स्ट मार्केटिङ, र सोशल मिडियाको मद्दतले - तपाईं आफ्ना दर्शकहरूको अगाडि हुन सक्नुहुन्छ जब उनीहरूले मोबाइल फोनमा विभिन्न एपहरू प्रयोग गर्छन्।
ग्राहकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुको अलावा, डिजिटल मार्केटिङले तपाईंलाई उनीहरूको गतिविधिहरू ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ। जब तपाइँ एक परम्परागत विज्ञापन अभियान चलाउनुहुन्छ, तपाइँ कसरी परिणामहरू ड्राइभ गर्नुहुन्छ भनेर हेर्न गाह्रो छ। तपाईंको रेडियो र टिभी विज्ञापनको कारणले गर्दा मानिसहरू तपाईंको व्यवसायमा आए तापनि, तपाईंको व्यवसायमा कति मानिसहरू आउँछन् भनेर मापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ।
तर डिजिटल मार्केटिङको मद्दतले, तपाईले धेरै मेट्रिकहरू सजिलैसँग निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै क्लिकथ्रु दर, छाप, हेराइ, प्रतिक्रियाहरू, र थप तपाईले कुन विज्ञापनहरू र कुन प्रकारको सामग्री तिनीहरूले खरिद सम्झौता गर्नु अघि देखेका छन् भनेर निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँलाई कुन मार्केटिङ विधिहरू सबैभन्दा प्रभावकारी छन् भनेर निर्धारण गर्न र तपाइँको रणनीति सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंका प्रतिस्पर्धीहरूले पहिले नै विभिन्न इन्टरनेट मार्केटिङ विधिहरूमा लगानी गरिरहनुभएको छ र नयाँ नेतृत्वहरू प्राप्त गरिरहनुभएको छ तर यदि तपाईंले डिजिटल मार्केटिङमा लगानी गरिरहनुभएको छैन भने, तपाईं पछि पर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ अझै तपाइँका प्रतियोगीहरु संग प्रतिस्पर्धा मा रहन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ एक सफल अनलाइन मार्केटिङ अभियान को स्थापना गर्नु पर्छ जसले तपाइँलाई उत्कृष्ट नेतृत्व प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ र तपाइँलाई तपाइँको प्रतियोगीहरु लाई गुमाउनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ।